paoma fizarana andiany 1 fiainana bateria
andininy ao amin'ny Baiboly momba ny avana
fa maninona ny iphone 6 no mihoampampana
Tsy handefa sary ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Teknolojia Apple taloha no manazava ny antony tsy handefasan'ny iPhone sary sy ny fomba fanamboarana azy, amin'ny olana mandefa sary amin'ny iMessages sy hafatra an-tsoratra.
Tsy tapaka ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Manazava ny manam-pahaizana Apple fa maninona ny iPhone no mikatona ary mampiseho aminao ny fomba hamahana ilay olana amin'ny alàlan'ny dingana tsotra amin'ny famahana olana.
Fa maninona ny iPhone no milaza fa mitady? Ity ny The Fix!
Teknolojia Apple taloha no manazava ny antony mahatonga ny iPhones hilaza fa mitady ary manazava ny fomba fanamboarana ny olan'ny karoka iPhone, tsikelikely.
Tsy milalao horonantsary YouTube ny iPhone-ko! Ity ny antony & The Fix.
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony tsy hilalaovan'ny iPhone ny horonantsary YouTube anao ary asehony anao ny fomba hamahana ilay olana na inona na inona fampiharana ampiasainao hijerena horonan-tsary.
Fa maninona ny iPhone no mijanona tsy mifandray amin'ny WiFi? Ity ny Marina!
Ny manam-pahaizana Apple dia mampiasa torolàlana famahana olana isaky ny dingana hanazavana ny zavatra tokony hatao rehefa mijanona tsy tapaka amin'ny WiFi ny iPhone.
Fa maninona no miandry na mijanona ny Apps iPhone-ko? Ity ny Fix.
Rehefa mahita ny fampiharana iPhone miandry fanavaozana ianao dia afaka manipy wrench amin'ny andronao io. Soa ihany, misy fomba fanamboarana ireo fampiharana iPhone miandry ny fanavaozana.
Tsy hovonoina ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony maro mety tsy hamonoan'ny iPhone anao, ary ny fomba fanamboarana iPhone izay tsy ho faty ho soa!
Tsy hamerina amin'ny laoniny ny iPhone-ko. Ity ny The Real Fix!
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia manazava tsara ny tokony hatao rehefa tsy hamerina amin'ny laoniny ny iPhone, ao anatin'izany ny vahaolana amin'ny rindrambaiko sy fitaovana izay hanamboatra ny iPhone ho tsara.
Ahoana no hanafenako ny nomeraoko amin'ny iPhone? Ahoana ny fomba hanaovana antso tsy fantatra!
Ny manam-pahaizana Apple dia mampiseho aminao ny fomba hanafenana ny nomeraon-telefaoninao amin'ny iPhone sy hanaovana antso tsy fantatra anarana!
Tsy hamafa sary ny iPhone? Ity ny The Fix.
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony tsy hamafana ny sary ataon'ny iPhone anao ary hampianatra anao ny fomba hamahana ilay olana amin'ny alàlan'ny torolàlana iray isaky ny dingana.
Milaza ny iPhone fa «miandry ny fampahavitrihana» ny iMessage. Ity ny The Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony ilazan'ny iPhone anao hoe 'miandry fanentanana' ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana rehefa tsy mihetsika ny iMessage!
Nofafako ny App Store, Safari, iTunes, na ny Camera avy amin'ny iPhone, iPad, na iPod! (Tsia, tsy nanao izany ianao!)
Avy amin'ny mpiasa Apple taloha: Very tsy hita ao amin'ny iPhone, iPad, na iPod anao ve ny App Store, Safari, iTunes, na ny app Camera? Ity ny fanamboarana!
Fa maninona no mafana ny iPhone-ko? Mihena koa ny bateriko! The Fix.
Namaly ny teknolojia Apple teo aloha, 'Fa maninona ny iPhone no mafana?' ary manazava ny antony mahatonga ny baterinao hihena koa. Ianaro ny fomba hamahana ny olana amin'ny tsara!
Fa maninona no tsy miasa amin'ny iPhone sy iPad-ko ny iMessage-ko? Ity ny The Fix!
Avy amin'ny mpiasa Apple taloha: Ianaro daholo ny momba ny iMessage sy ny fomba hamaritana ary hamahana ireo olana mahazatra amin'ny iMessage amin'ny iPhone, iPad, ary iPad.
Tafiditra ao anaty maody finday ny iPhone-ko. Ity ny The Real Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony mahatonga ny iPhone-nao miraikitra amin'ny maodely an-doha, ny fomba fanamboarana azy, ary ny tetika hamoahana zavatra ao anaty jack headphone anao na ny port Lightning.
Fa maninona ny iPhone App Store no tsy mandeha sa tsy madio? Ity ny The Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony tsy miasa amin'ny iPhone, iPad, na iPod anao ny App Store ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana ho tsara!
Tsy hivadika ny iPad-ko! Ity ny The Real Fix.
Manazava ny zavatra tokony hatao ny manam-pahaizana Apple raha tsy hivadika amin'ny fampiasana torolàlana momba ny famahana olana mora foana ny iPad-nao.
Fa maninona ny iPhone no miteny hoe tsy misy karatra SIM? Ity ny The Real Fix!
Avy amin'ny mpiasa Apple taloha: hasehoko anao tsikelikely ny fomba hamaritana sy hanamboarana ny hafatra tsy mety amin'ny karatra 'No SIM' amin'ny iPhone-nao, indray mandeha.
iPad Tsy mifandray amin'ny WiFi? Ity ny antony & Ny tena fanamboarana!
Nanazava izay tokony hatao ny manam-pahaizana Apple raha tsy mifandray amin'ny tambajotra WiFi ny iPad. Hasehoko anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana tsikelikely!
SIM tsy tohanana amin'ny iPhone? Ity ny The Fix!
Milaza ve ny iPhone fa tsy tohanana ny karatra SIM anao? Ity lahatsoratra ity dia hanazava ny antony ary hanoro anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny tsara.